တားရော့များနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ( သဂျီးKai ၏ဟောစာတမ်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Members » တားရော့များနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ( သဂျီးKai ၏ဟောစာတမ်း )	25
တားရော့များနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ( သဂျီးKai ၏ဟောစာတမ်း )
Posted by surmi on Jun 22, 2015 in Members | 25 comments
*** တားရော့များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ***
SEA Game ဘောလုံးဗိုလ်လုပွဲအတွက် အပျော်တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်မှာ သဂျီးမင်း Kai က နိုင်ငံရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး တားရော့ကဒ်လေးတွေကို စမ်းသပ်ချင်တဲ့သဘောလေးမန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ် ။
အဓိက မေးမြန်းတာကတေ့ာကိုရင်စည်သူ (ခ) စ်ိန်ပလိမ်တိမ် မုန့်ကြိုးလိမ် ကိုပါ ။
အဲ့ဒီမှာ ကျနော်က “” ကျနော့်ဆီက တက်လာတဲ့ ကဒ်လေးတွေကိုရော မသိချင်ဘူး လားလို့မေးလိုက်တော့ ………
သဂျီးမင်းက ကဒ်ကိုတင်လိုက်ပါ တဲ့ ။
သူဟောပါမယ်တဲ့ဗျာ ဒီလိုဆိုတော့လည်း မောင်ဆာမိတို့ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလို့မဖြစ်တော့ပေဘူးပေါ့ ။
သဂျီးကိုယ်တိုင် လိုလိုလားလား ဟောပေးမယ်ဆိုမှတော့ စီးတီးမတ်ပြေးပြီး တားရော့တစ်ထုတ်ဝယ်လို့ အကျိုးဆောင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်တို့ထင်ထားတာ သဂျီးကိုကံကြမ္မာတွေ ဘာညာတွေမယုံလောက်ဘူး လို့ ပေါ့ ။
အခု သူက အင်တာနေရှင်နယ်တားရော့ဗေဒင်ကို အလေးထားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ သိရပြန်တော့ အံ့သြတာလဲတပိုင်းပေါ့ဗျာ ပြီးတော့ သဂျီးမင်းရဲ့ မက်ဂျစ်ရှင်အတတ်ပညာတွေကိုလည်း ရင်သပ်ရှုမော အားပေးလိုတာလဲတကြောင်းမို့ ကျနော်မောင်ဆာမိက ၃၅၀၀ ကျပ်အကုန်ခံပြီး တားရော့တစ်ထုတ်နဲ့ အကျိုးဆောင် လိုက်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းးး ………
သဂျီးမင်းရဲ့ ဟောကြားနိမိတ်ဖတ်မယ့် ဟောစာတမ်းကိုလည်း ဒီပို့စ်ထဲမှာ ကွန်မန့်အဖြစ် ရေးသား စေလိုပါကြောင်းးး ……
ကျနော် မောင်ဆာမိကတော့ သဂျီးဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရသူမို့ ဆဲချင်သပဆို သဂျီးသာ ဆဲကြပါစေလိုကြောင်းးးးး ………
မန်းဂဇက်ဆိုဒ်ကို တားရော့ပို့စ်များကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ကြရမယ်ဆိုရင်လည်း တောင်းဆိုသူသဂျီးမင်းကိုသာ ဆဲကြစေလိုပါကြောင်းးးး …………
ပုံ (၁) လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဆွဲခဲ့တဲ့ နိမိတ်ပုံကဒ်ပါ ။
မှော်ဆရာ ကဒ်လေးတက်လာလို့ သဂျီးဘယ်လို ပြောမလဲသိချင်မိပါတယ် ။
ပုံ (၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဆွဲခဲ့တဲ့ကဒ်ပါ ။
The Moon တဲ့ ။ သဂျီးခိုင် ဘယ်လိုနိမိတ်ကောက်ယူမလဲ အလွန်သိချင်နေမိပါပြီ ။
ပုံ(၃) ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဆွဲခဲ့တဲ့ကဒ်ပါ ။
The Fool တဲ့ ။
ဟုတ်ကဲ့ ……… သဂျီးမင်းရဲ့ မက်ဂျစ်ရှင်တွေကို မြင်တွေ့ချင်နေမိပါပြီ ။ဝ
ကဲဗျာ …… သဂျီးစကား ဝါးတားတား မလုပ်ကောင်းသမို့ အမြန်သာဟောကြားနိမိတ်ဖတ်စေလိုပါကြောင်းးးးးး …… About surmi
မြစပဲရိုး says: ကဆာမိ
. နောက်တာမဟုတ်ဘဲ တကယ်သာ ဆွဲလိုက်တဲ့ ကဒ်တွေ သာဆိုရင် ဝေါင်း လို့ အော်လိုက်ပျစေ။
အပြင်မယ် လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ ပုံရိပ် တွေကို ကဒ် တွေက တကယ်ဘဲ ကိုယ်စားပြုနေတာ။
နံပါတ်(၁) က သေသူတွေ ရှင်အောင် လုပ်တာ မှော်ဆရာ မှ တတ်နိုင်သကိုး။
နံပါတ်(၂) က လမင်း ကို ခွေးတွေ အူနေတာ မြင်ကြတဲ့ အတိုင်းဘဲ။
နံပါတ်(၃) က အရူးသိုင်းကွက်နင်း ဟိုပြော ဒီလျှောက် ဖြစ်ချင်သလို ကစင့်ကလျား တပ်ပျက်နေတော့တာ။
ပါတီ အတွက် အဖြေက သိနေပြီး ကို ( မှော်အတတ် သာမပါခဲ့ရင်ပေါ့)။
သူကြီး ထုတ်မဲ့ အဖြေ က သမ္မတ ကို ပြောတာ မဟုတ်လား။
အဲဒါကမှ တကဲ့ သဲထိတ်ရင်ဖို မျက်နှာပြောင် တိုက် ပြိုင်ပွဲ ပေါ့။
PS – ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် စာမျက်နှာ ပေါ် သမိုင်းထင်ပြီ
. ရှေ့နှစ် ဒီ အချိန် ပျော်ပျော်ကြီး ပြန်ပြီး စားမြုံ့ပြန် နိုင်တာပေါ့။
. နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ အစိုးရမင်းများအား အသရေဖျက်မှု ပုဒ်မ တွေ ထွက်လာရင်တော့လဲ ရွာ ကို နှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့။
ဈာန်​ says: အရီး​ရေ
ဒီပို့စ်​ထဲက တား​ရော့ပုံ​တွေ မရှိ​တော့ဘူးဗျ
ဒီပို့စ်​က ​ရွေး​ကောက်​ပွဲအပြီးမှာ ပြန်​လည်​စမြုံ့ပြန်​ရမယ့်​ဟာ …
မြစပဲရိုး says: ဒီရက်ထဲ NY က ခွေးတစ်ကောင် (ကြောင်လို့ ပြောတာ ဝုတ်ဘူး ) ထဟောင်နေ တာ လဲ စိတ်ပိန်ပါ့။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ကျောင်းသား တွေ ကျေးဇူး ကို ကန်း တယ်ပြောရ အောင် အဲဒီ ၈၈ကျောင်းသား တွေထဲ % ဘယ်လောက် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မှီပြီး အဲဒီမှာ ခိုခွင့်ရခဲ့ တာလဲ ပြန်ပြီး လက်ချိုး ရေ လိုက်ပါဦး။
. အဲဒီ ကျေးဇူးကို သူတို့ကန်းနေတာ ကို သူက တပြန်စီး ပြောနေရသေး။
မှတ်ထား နော်။ ၈၈ ကျောင်းသား တွေထဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပံ့ပိုးနေဆဲ၊ ချစ်ခင်လေးစား နေဆဲ ဒါတင်မက ဆက်ပြီး ရပ်ပေးနေမဲ့ သူတွေ အများကြီးဘဲ ဆိုတာ။
(ကြုံတုန်းလေး သတိရလို့ ကိုယ်လဲ အားကျမခံ ပြန် ဟောင် ပေးလိုက်တာ)
ဦးကျောက်ခဲ says: အဲသည့် နစ်ကြောင်တွေက တိုင်းပြည်မပျက်မချင်း ကြေနပ်မှာမဟုတ်…
ကျောင်းသားတွေကို ထိုးကြွေးသွားပြီး ၊ ခေါင်းရှောင်တွေက ပြေးရော…
အဲဒါကြောင့် ဘွားတော်က တကသ နဲ့ ဗကသ ကို သီးခြားဆက်ဆံတာ…
ဦးကြောင်ကြီး says: ကတိချိုးဖောက်တဲ့ လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရ ဖြစ်တယ်လို့ ဗကသ ဝေဖန်
မြေလတ် နဲ့ ဧရာဝတီ စစ်ကြောင်း တွေ ဟာလည်း သပိတ် လှန် ခဲ့တာ မဟုတ် ပဲ စောင့်ကြည့် သပိတ် တွေ ဖြစ်ကြ တယ်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကနေ ပြင်ဆင် အတည်ပြု ပြီး သမ္မတ ဆီ ပေးပို့ ထား တဲ့ အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ ဟာ ၄ပွင့်ဆိုင် သဘောတူ မှု တွေ ကို မျက်ကွယ် ပြုထား တဲ့ အတွက် ကတိကဝတ် တွေ ကို ချိုး ဖောက်တဲ့ လွှတ်တော် နဲ့ အစိုးရ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ဗကသများ အဖွဲ့ ချုပ် က စွပ်စွဲ ပြစ်တင် လိုက် ပါတယ်။
လက်ပံတန်း မှာ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ် အဖြိုခွဲ ခံခဲ့ ရပြီး သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား တွေ နဲ့ ဝန်းရံသူ တွေ ဖမ်းဆီး ခံ ထား တဲ့ အခု အချိန် မှာ လမ်းပေါ် ထွက် ဆန္ဒ ပြ မှု တွေ လုပ်ဆောင် ဖို့ အခြေ အနေ မှာ မရှိ ပေမယ့် လွှတ်တော် နဲ့ အစိုးရ တို့ ဘက် က ၄ပွင့်ဆိုင် သဘောတူ ချက် တွေ အပေါ် ဘယ်လို ချိုး ဖောက် ခဲ့ တယ် ဆိုတာ ကို အများ ပြည်သူ ရှေ့မှောက် ဆက်လက် ဖွင့်ချ သွား မယ် လို့ ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ ပြောခွင့်ရ ကိုအောင်နေပိုင် က ဘီဘီစီ ကို ပြောပါတယ်။
ဒီမို ကရေစီ ပညာရေး သပိတ် ရဲ့ ပင်မ စစ်ကြောင်း သာမက မြေလတ် နဲ့ ဧရာဝတီ စစ်ကြောင်း တွေ ဟာလည်း သပိတ် လှန် ခဲ့တာ မဟုတ် ပဲ စောင့်ကြည့် သပိတ် တွေ ဖြစ်ကြ တယ်လို့ လည်း ကိုအောင်နေပိုင် က ဆိုပါတယ်။
၄ပွင့်ဆိုင် တုန်းက သဘောတူ ထား တဲ့ ကျောင်းသား တွေ ရဲ့ တောင်းဆို ချက် ၁၁ ချက် ကို တကယ် တမ်း အကောင်အထည် ဖော် လိုက် လျောခြင်း မရှိ ခဲ့တဲ့ တွက် ပညာရေး ဥပဒေ ကန့် ကွက် မှု တွေ ကို အခု စစ်ကြောင်း အားလုံး အနေနဲ့ ပြန်လည် ပူး ပေါင်း လှုပ်ရှား သွားမယ် လို့ လည်း ကိုအောင်နေပိုင် က ပြောပါတယ်။
ပညာရေး ဥပဒေ ထဲ မှာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် လို့ မသုံးနှုံး ပဲ ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ် လို့ သာ သုံးနှုံး ထားတာ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဗကသ များ အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ သမဂ္ဂ ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ် ပေါ် မှာ အခိုင်အမာ ရပ်တည် ပြီး ကျောင်းသား သမဂ္ဂ တွေ ကို တရားဝင် ရပ်တည် ခွင့် ရလာ တဲ့ အထိ တောင်းဆို လှုပ်ရှား သွားမယ် ဆိုပြီး ကိုအောင်နေပိုင် က ပြောပါတယ်။
Ma Ma says: ဒီပိုစ့်မှ လူမစည်ရင် ဘယ်ပိုစ့်မှ လူမစည်တော့ဘူး။ သဂျီးကွန်မန့်တက်မလာသေးတော့ မျက်စေ့ထဲမှာတော့ သဂျီးမင်းခေါင်းကုတ်စဉ်းစားနေဟန်ကို မြင်မိတယ်။ ဒီမိုရွာကြီးမှာ ကိုယ့်အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်နိုင်တာမို့ အခုတားရော့ကဒ်တွေကို တစ်ယောက်တစ်မျိုး ဘယ်လိုများ ဖတ်ကြမလဲ သိချင်မိသား။ ရွာ့အရီးကတော့ ရွာ့အရီးပီသစွာ ဖတ်ပြပြီးသွားပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဝါရောင် ဂိုဏ်းး အတွက်ရော
kai says: Magician Tarot Card Meanings Keywords
surmi says: အဟမ်းးးးး !!!!
ပိတ်သတ်ကြီးက သဂျီးမင်းရဲ့ အမြင်စစ်စစ် အာဘော်ကို နိမိတ်ဖတ်တာ မြင်ချင်ပါသတဲ့ အီးလိုတွေ ကူးမတင်ဘဲ မြင်သည်ကို မြင်သည့်အတိုင်း ဟောကြားပေးပါတဲ့ခင်ဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: Magicianကို ဘာလို့မှော်ဆရာလို့ပြန်သလဲ..တွေးနေမိတာ…။
တကမ္ဘာလုံးက၀ိုင်းကြည့်နေသမို့.. မျက်လှည့်ဆရာ လိမ်ရခက်မယ်ပေါ့…။
မျက်လှည့်ကတော့ ပြဦးမယ်ပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3140
surmi says: မျက်လှည့်ဆရာ လို့မပြောချင်လို့ပါသဂျီးရယ် ဟဲဟဲ
မျက်လှည့်က သိပ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းရင် မှော်အတတ်လားထင်ရတယ်မဟုတ်လား
ဒါကြောင့် မှော်ဆရာလို့ တင်စားလိုက်ရပါကြောင်းးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သဂျီးကတော့ ရွာသူားတွေကို အကဲစမ်းပြီး ဘိုလိုတော့ သွားပြီ။ ငြင်းခုံခြင်းအနုပညာလို့ ဆိုတဲ့ သဂျီးရဲ့ အနုပညာမြောက်ရွာကြီးအတွက် လက်ဆောင် (ဒီပိုစ့်က လူစည်မှာမို့လို့ လူစီတုံးလက်ဆောင်) “အပေါ့စွန့်ခြင်း အနုပညာ”
Mike says: .ရွေးကောက်ပွဲဟာ မျက်လှည့်ဆန်မယ်လို့ဆိုလိုသလား
.မျက်လှည့်ဆန်မယ်ဆိုတာ အံ့ချီးဘနန်းကိစ္စတွေ တွေ့ရမယ်ပြောချင်တာ
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဆွဲခဲ့တဲ့ကဒ်ကတော့ လမင်းလိုအေးမြမှုကိုပေးနေတဲ့
.လူထုခေါင်းဆောင်ကို….နည်းမျိုးစုံနဲ့ဝိုင်းဟောင်နေတဲ့ ဆန့်ကျင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်စားပြုနေတယ်…
.အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကောက်လို့ရတဲ့ဂဏန်းကလည်း ၁၃၃၂…ဆိုတော့ ကိုးဂဏန်း
.ကဒ်မှာလည်း ၁၈ ဆိုတဲ့ကိုးဂဏန်းတွေ့တယ်…ကံကောင်းမှာသေချာ
.ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အတွက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်..အရူးချီးပန်းသိုင်းကွက်တွေနင်းရင်း ချောက်ထဲကျမှာသေချာ
.ဇီးရိုးလည်းပါနေလေတော့…ကံမကောင်းနိုင်တော့… .ပုံ။ တားရော့ကျွမ်းကျင်ဆြာဂျီးမိုက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12169
Alinsett @ Maung Thura says: အခုလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ.. မှော်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ နိဂုံးလို ..မီးခိုးလုံးဖြစ်ပြီး..
.မှော်ဆရာတစ်ယောက် ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ အဆန်းဆန်းအပြားပြား ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေသာ ..ရစေလို…
အမေစုဟာ… ဒီ့နောက်ပိုင်းမှာ.. မြန်မာပြည်အတွက် အလင်းရောင်ပေးစွမ်းသော..
အပူကိုအခြေခံတဲ့ နေဆီက အပူ အလင်းကို စုတ်ယူပြီး..တဆင့်ပြန်ဝေမျှတဲ့ အလင်း အအေးများနဲ့…
မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်… လမ်းပြ အလင်းရောင် ပေးစေလို…
မြန်မာပြည်သူားတွေက..အမေ့ဘေးမှာ ကြယ်တွေလို ဝန်းရံနေစေလို… .ပြည်ခိုင်ဖြိုးဟာလည်း… သူရူးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာ..သူကောင်းအဖြစ်နဲ့ …
သူ့နာမည်အတိုင်း ပြည် ခိုင် ဖြိုးဖို့… စေတနာ အစစ်အမှန်နဲ့သာ လုပ်ဆောင်နိုင် လာမယ်ဆိုရင်….
အောင် မိုးသူ says: လမင်းကြီးလို ထိန်ထိန်သာတော့မယ်ပေါ့
ဦးကြောင်ကြီး says: ဒေဗင်ဝကိတ် ဆာလကီး ကစည်သွပ် ကြွားပါဒေါ့ဗျိုး…။ နှာထောင်ခြင်လှပီ…
manawphyulay says: နောက်ဆုံးဆွဲဖို့ တစ်ကဒ်ကျန်ခဲ့သေးတယ် ဦးဦးဆာမိရဲ့… ဘယ်သူ့အတွက် ကဒ်လည်းဆိုတော့ တဂျီးအတွက် အထူးဆွဲတဲ့ ကဒ်နိမိတ်လေးလည်း ကြည့်ချင်မိပါသေးတယ်….
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ၂ပါတီ ကဒ်တော့ နောက်မှ …။ ခုတော့ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကတော့ ဗုဒဟူး ဂြိုလ်ကိုယ်စားပြုတဲ့ နံပါတ် (၁) မှော်ဆရာကဒ်ပါ။
ကျနော်ကတော့ မျက်လှည့်ဆရာအဖြစ်ပဲ မေးခွန်းအခြေအနေအရသတ်မှတ်ပါ့မယ်။
မျက်လှည့်ကို လူတွေက လိမ်မယ် သိသိကြီးနဲ့ ကြည့်တယ်။ အာရုံတစ်ခုကို အယောင်ပြပြီး နောက်တစ်ခုကို ထပ်လိမ်မယ်ပေါ့။
လုပ်ဇာတ်ကြီးပေါ့။ စားပွဲပေါ်က တုတ် ၊ ခွက်၊ ဓါး၊ ကြယ် ဟာ အဆင့်မြင့် တားရော့ခ်ပညာရဲ့ အဓိက ကျောရိုးပါ။
တားရော့ခ် ပရိုဖက်ရှင်နယ် ဟောတဲ့လူတွေက ပစ္စည်းလေးပါးကို ဟောတဲ့အခါ အဆောင်အဖြစ် ချထားရပါတယ်။
အခု ဆိုချင်တာက တုတ် ခွက် ဓါး ကြယ် ဟာ လူတွေရဲ့ ထောက်တိုင် အရေးလေးပါးပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ မျက်လှည့်ပြပါ့မယ်။ ။ ။ ဂြိုလ်ရောက်ရှိသဘောအရ သွေးစွန်းတဲ့အထိတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ပဲ ဆုတောင်းရပါ့မယ်။ (မစွန်းစေချင်ပေမယ့်)
.. ရန်သူကို မုန်းရင် ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာပဲ ထားပါ ဆိုတာလဲ လုပ်တယ်။
.. လနတ်သမီးလေးကလည်း ငိုနေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ်။
.. အရူးကလည်း နေကိုပဲကြည့်ပြီး ချောက်ထဲခုန်ချတာကို လုပ်တော့မယ်။
.. 2015 ထဲရွေးကောက်ပွဲသာမဖြစ်ရင်..။ ။
မျက်စိမရှမ်းကြစေဖို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: လာရှင်းပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုရင်လေးရေ။
ဒီမှာဖတ်ရင်းနဲ့ တားရော့ကဒ်တွေကို စိတ်ဝင်စားလာပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: စကားအတင်းစပ်လေ.. ဒီကွန့်မန်းရေးပြီး နာရီပိုင်းလေးအကြာပဲ ဒီသတင်းတက်လာတော့..
ရှောင်လင်ကျောင်းသိုင်းထွက်တွေကတော့ တစ်ဂိုဏ်းထဲ ရှောင်လင်သိုင်းပညာကို အခြေခံလာမှာတော့..
မြင်ယောင်သေး။ အူးကြောင်ရေ.. ခင်ညားအလုပ်လုပ်နေတဲ့ စီအိုင်အေ.. ဆိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး အဖွဲ့ကလူတွေဖြစ်စေချင်သလို ဖြစ်ချင်ရင် ရေခဲတောင် ကြာပွင့် စားထားဗျ။
နောက်ကြောင်းပြန်ဝေဖန်ရေးမလုပ်ဖို့ မီဒီယာကို ဦးခင်ညွန့် သတိပေး (ရုပ်သံ)
“စနစ်ပေါ်မှာလဲ မူတည်တယ်ကွ၊ ငါတို့ကလဲ အရင်က စစ်အစိုးရလေ၊ စစ်အစိုးရဆိုတော့ စစ်အစိုးရ ပုံစံအတိုင်း လုပ်ရတာ၊ အခုက ဒီမိုကရေစီ စနစ်လေကွ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အတိုင်း သွားတယ်၊ သို့သော်ငြားလည်း တို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆီလျော်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲ ဖြစ်ရမယ်…ဒါဘဲ”
ရုပ်သံရှုစားရန် – http://tv.dvb.no/?p=6303
မြစပဲရိုး says: အခုဘဲ ကြည့်လိုက်ရတယ် ကိုရင်လေး။
သူ ဒေါနဲ့ မောနဲ့ ပြောသွားတဲ့ “သို့သော်ငြားလည်း တို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆီလျော်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲ ဖြစ်ရမယ်…ဒါဘဲ”
“အဘ တို့ စည်းစိမ်တွေကို အကာအကွယ်ပေးရမဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကို ပြောတာလား” လို့
. မေးလဲမေးချင်တယ်။ မေးလဲ မမေးရဲ။
မြစပဲရိုး says: ဘာရာထူးမှ လက်ရှိ မရှိတာတောင် မာန်တက်နေဆဲ ပုံမို့ ထူးဆန်းတယ်ပြောရမလား၊ မထူးဆန်းဘူး ပြောရမလား။ မသိတော့။
. ကြောင်ကြောင် ရေ ဒီမှာ ကြည့်ကွဲ့။ အချင်းချင်း စည်းလုံးမှုမရှိဘဲ ခွပ်ဖို့ချည်း ကြိုးစား မနေနဲ့။
ရှင့် အဘ က ပါဝါပြနေဆဲဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ကြည့်ပြီးသွားပြီ။
ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်တုန်းလည်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်လို့ ဆိုခဲ့တာ သွားသတိရမိတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အားလုံးက ပြဇာတ်စင်ပေါ်မှာ မဟုတ်ဘူးလား။
kai says: Moon Tarot Card Meanings Keywords